China Camping PITE Emergency tube Tlọikwuu ụlọ ọrụ na-emepụta | Sisili
Ihe: PET na aluminum foil
Size: 150 * 240 (emeghe)
Ọ dị mma maka ndị njem ma ọ bụ ndị ọgba ọsọ na mpaghara dịpụrụ adịpụ ebe enwere ike ịchọ ụlọ ntu mberede.
Arndọ aka na ntị: Ihe anaghị ere ọkụ. zere ọku nke ire ọkụ na ihe ọkụ ọkụ.
Ochicho ndi okenye choro n'ihi nsogbu ojoo.
1. Gosiputa ihe kariri 80% nke oke ahu mmadu, enwere ike kechie ya na mberede, iji zere ikpo oku.
2. Ifufe na mmiri ozuzo, na-atụgharị uche, dị mfe ịnapụta ndị ntị.
3. Obere olu, ọkụ dị nfe, mgbe mpịachi maka ọrụ n'èzí.
4. Enwere ike iji ya mee ihe ugboro ugboro.
Emeghekwala ya nso n’ebe ọkụ dị.
Ebumnuche dị iche iche, ihe enyemaka na-azọpụta ndụ mberede zuru ụwa ọnụ, ihe dị mkpa nke ngwa ngwa mberede
A. ọ bụrụ na enwere ọnọdụ mberede ọ bụla, ụlọ nzọpụta nwere ike ịkwado ọnọdụ ahụ nke ọma, dị ka ngwa ngwa ihe mberede, na-eche nkwado azụ.
B. n'ihe banyere ihe mberede, etinyere enyemaka mbụ, merụrụ ahụ n'ọhịa, mana ọnya ahụ, zere ịwụfu ọbara gabiga ókè, maka ịgbatị oge, nwekwara ike iji kpochapụ ahụ merụrụ ahụ, nwere ike igbochi ọkụ ọkụ ma ọ bụ
ikpughe na anyanwụ, ike radieshon (gụnyere ahụ ọkụ na ike anyanwụ) ntụgharị uche dị mma nke 80%, yana enwere ike iji ya mee ihe yiri ngosiputa maka ịdọ aka ná ntị okporo ụzọ ma ọ bụ zigara ndị mgbapụta mgbaàmà.
C. mgbe ejiri ihe mberede megharia ụgbọ ala, iji zere mmanụ na PuTan mgbe ọ dị n'ala, ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ọnọdụ dị ọcha tupu oge ọkọchị ụgbọ ala nke okpomọkụ iji gbochie ọkụ dị jụụ n'ime, enwere ike iji ya dị ka poncho
maa ụlọikwuu ma ọ bụ tebụl linen tebụl nwa oge na picnic.
D. elu ike, ogologo direction ete n'ime eriri nwere ike ibu 1.5 tọn.
E. n'ụzọ dị irè na ihu igwe ọkụ na-egosipụta ìhè anyanwụ na okpomọkụ, debe ọnọdụ okpomọkụ nke ahụ.
Nke gara aga: 55L Camping Hiking azu paaki Molle Rucksack Waterproof njem Daypack
Osote: Inglọikwuu na-ama ụlọikwuu 2/4 Onye Familylọ Ntu Ezinụlọ N'èzí
Entmụ nwoke Teepee Tent
Crckt Hmụaka angghọta entlọikwuu
Gfc ụlọ Top tent
Princess Pop Up Tlọikwuu
Vlanahụ Fire Mgba ọkụ Mberede Bushcraft Flint ...
Vlanahụ Fire Starter, Gear Mberede Mberede, Na-adịgide Adị n'doorlọikwuu, Starter Magnesium oku, Inflatable ụlọ Tlọikwuu, Xtm ụlọ Top tent,